ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေ အချိုရည် မသောက်ပါနဲ့ - Hello Sayarwon
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လေဒီဗိုက်လေး အများစု သိထားတာက ဘေဘီလေး ကျန်းမာစေဖို့ အယ်လ်ကိုဟောကို ရှောင်ရမယ်ပေါ့။ တကယ်ကတော့ ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေချိန်မှာ မေမေရော ဘေဘီလေးပါ ကျန်းမာစေဖို့ဆိုရင် အယ်လ်ကိုဟောပါတဲ့ သောက်စရာတွေအပြင် ရှောင်ရမယ့် အရာတစ်ခု ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ အချိုရည်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အချိုရည်သောက်တာ ဘေးကင်းရဲ့လား………
အမှန်ကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ နို့၊ အသီးစစ်စစ်ကို ဖျော်ထားတဲ့ အသီးဖျော်ရည်၊ မစ်ရှိတ်စ်တွေက အဆင်အပြေဆုံးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဆိုဒါ၊ အချိုရည်၊ ကဖင်းပါတဲ့ သောက်စရာတွေ။ အားဖြည့်အချိုရည်လိုမျိုး သောက်စရာတွေကို လုံးဝရှောင်ရှား သင့်ပါတယ်။
အရမ်းပူတဲ့အခါ အချိုရည် အေးအေးလေး သောက်ချင်တဲ့ အာသီသ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ရင် မသောက်ပါနဲ့။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ ချိုချိုအေးအေးလေး သောက်ချင်တယ်ဆိုရင် သစ်သီးစစ်စစ်ကို ကြိတ်ဖျော်ထားတဲ့ အသီးဖျော်ရည်။ သံပုရာရည်၊ အုန်းစိမ်းရည်တို့က အသင့်တော်ဆုံးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အချိုရည် မသောက်ပါနဲ့လို့ ပြောရတဲ့ အကြောင်းအရင်းလေးကို တစ်ချက်လောက် ကြည့်လိုက်ရအောင်လား။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အချိုရည် သောက်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ……….
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရချိန်မှာ မေမေက အချိုရည် သောက်မယ်ဆိုရင်
ကဖင်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ခံရနိုင်ပါတယ်
ကိုလာလိုမျိုး အချိုရည်မှာ ကဖင်းပါဝင်နေပါတယ်။ သောက်လိုက်ရင် လန်းဆန်းသလို ခံစားရစေပါတယ်။ ဒီလိုခံစားရတာက ကဖင်းက သွေးကြောတွေထဲကိ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရောက်သွားတာကြောင့်ပါ။ ကဖင်းက မေမေ့ ခန္ဓာကိုယ်က သွေးကြောတွေထဲမှာတင် လှည့်ပတ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချင်းကနေတဆင့် ဘေဘီလေးဆီကို ရောက်ရှိသွားပါတယ်။
ဒီ ကဖင်းတွေက သောက်ပြီး ၁၁ နာရီကြာတဲ့အထိ သွေးလည်ပတ်မှု စနစ်ထဲမှာရှိနေပြီး ဗဟိုအာရုံကြော စနစ်နဲ့ adrenal ဂလင်း အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှု ရှိစေပါတယ်။ မမွေးသေးတဲ့ ဘေဘီလေးကလည်း ဒီ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေတဲ့ ကဖင်းကို ကြိုးစားတိုက်ထုတ်နေရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကဖင်းက ဆီးခဏခဏ သွားစေတာကြောင့် ရေဓာတ် ခမ်းခြောက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေ တစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်နေ့ကို ကဖင်း ၂၀၀ မီလီဂရမ်ထက် ကျော်ပြီး မစားသုံးသင့်ဘူးလို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ ကဖင်းက အိပ်စက်မှုကို ထိခိုက်စေသလို ဦးနှောက်ကို အနားမရတာမျိုး ဖြစ်စေတဲ့အပြင် တစ်နေ့ကို ၃၀၀ မီလီဂရမ်ထက် ပိုစားမိမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်၊ လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ တစ်နေ့တာမှာ ကဖင်း ၅၀၀ မီလီဂရမ်ထက်ကျော်ပြီး စားသုံးမိမယ်ဆိုရင် ဘေဘီလေး အနေနဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်း မြန်တာ၊ အသက်ရှူနှုန်း မြန်တာ၊ ရင်ပူတာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ ကဖင်းပါတဲ့ သောက်စရာတွေကို မသောက်သင့်ပါဘူး။
Sweeteners နဲ့ တာရှည်ခံပစ္စည်းတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်
ဆိုးဆေးတွေ၊ တာရှည်ခံပစ္စည်းတွေ နဲ့ sweeteners တွေက ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တောင် ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ပါဘူး။ အရာရာကို သိထားရမယ့် ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်မှာဆို ပိုလို့တောင် သတိထားရပါမယ်။ ထိခိုက်နိုင်ခြေက ပုံမှန်ထက် ပိုများနေတယ်လေ။
အချို အစားများတာက ကိုယ်အလေးချိန်ကို တိုးစေနိုင်သလို ကိုယ်ဝန်​ဆောင် ဆီးချို အပါအဝင် မလိုလားအပ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ခံစားရစေနိုင်သလို ဘေဘီလေးရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆိုးဆေးတွေက ဘေဘီလေးကို ဓာတ်မတည့်မှု ဖြစ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မေမေရော ဘေဘီလေးပါ အာဟာရ ပြည့်ဝစေဖို့ အစာအာဟာရကို ပြည့်ဝမျှတ​အောင် သေချာလေး ဂရုစိုက်ပြီး စားသုံးသင့်ပါတယ်။ မေမေက အာဟာရ ပြည့်ဝအောင် စားမှ မေမေရော ဗိုက်ထဲက ဘေဘီလေးပါ ကျန်းမာစေမှာပါ။
အချိုရည်တွေက ကယ်လ်လိုရီ ပါဝင်မှု များပေမယ့် ဘေဘီလေး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတန်ဖိုးကတော့ ဇီးရိုးပါ။ ကယ်လ်လိုရီ ပါဝင်မှုများတာက ဘေဘီလေးကို အဝလွန်စေတာမျိုး ကျန်းမာရေး ပြဿနာ ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
အချိုရည်တွေမှာပါတဲ့ အမြှုပ်တွေက မေမေ့ကို အစာမကြေတာ ရင်ပူတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အမြှုပ်တွေကို ဖြစ်စေတဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် နဲ့ ကဖင်း ပေါင်းစပ်မှု က မေမေရော ဘေဘီလေးကိုပါ ရင်ပူတာမျိုး ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
အချိုရည်တွေမှာပါတဲ့ အရသာတွေက သဘာဝ အရသာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချိုရည်တွေကို အရသာပြည့်အောင် ဖြည့်စွက်ထားတဲ့ အရသာတွေထဲမှာ phosphoric acid ပါဝင်နေပါတယ်။ phosphoric acid က အရိုးတွေထဲက ကယ်လ်ဆီယမ် ပမာဏကို ကျစေပါတယ်။ ကယ်လ်ဆီယမ် နည်းတာက အရိုးတွေကို ကျိုးလွယ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကယ်လ်ဆီယမ် ပြည့်ဝဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
ဘေဘီလေးရဲ့ ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မေမေက သကြားတွေ အများကြီးစားတာ၊ အချိုရည်တွေသောက်တာက ဘေဘီလေးကို ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း နည်းစေသလို သင်ယူလေ့လာနိုင်စွမ်း အားနည်းစေတယ်၊ လို့ လေ့လာမှု ရလဒ်တွေအရ သိရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မေမေက အချိုရည်တွေ သောက်မယ်ဆိုရင် ဘေဘီလေးက လှုပ်ရှားမှု စွမ်းရည်၊ စကားပြောဆိုနိုင်စွမ်း၊ ဟန်ချက်ညီညီ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း အားနည်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကဲ……. အချိုရည် အေးအေးလေး တစ်ငုံက ဘေဘီလေးကို တအား ထိခိုက်စေနိုင်လို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ အချိုရည် မသောက်ကြဖို့ ပြောပါရစေ မေမေတို့ရေ………….